AMBATOBOENY : Ahiana hitoka-monina noho ny fahapotehan’ny lalam-pirenena faha-33 Bis
Potika tanteraka ny lalam-pirenena faha-33 Bis mampifandray an’Andranofasika sy Ambatoboeny, ankehitriny. Vokatry ny oram-be andro vitsivitsy izay dia tapaka sahady ny lalana eo amin’ny pk-12 ao Soaniavina. 19 novembre 2020
Tsy nisy fanamboarana hatramin’izao na efa nodradradradraina mafy ny hanamboarana io lalana io, hoy ny mponina. Efa nisy ny taratasy izay nanaraka an-tanan-tohatra amin’ny fangatahana ny hanamboarana ity lalam-pirenena ity, ary nisy fotoana efa tonga tany an-toerana ny praiminisitra saingy tsy nisy zava-bita. Mitaraina araka izany mponina izay manahy mafy amin’ny fitokana-monina ateraky ny fahatapahan-dalana raha sanatria tsy misy fanamboarana. Koa manaitra hatrany ny tompon’andraikitra mba hijery akaiky sy hitondra vahaolana amin’ny fahasahiranany mponina ao Ambatoboeny.
Mitaraina amin’ny Filoha Andry Rajoelina sy ny praminisitra Ntsay Christian izy ireo ary manainga ny solombavambahoaka sady filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Rahantanirina Lalao sy Mokhtar Andriantomanga governoran’i Boeny, mba hanetsika ny fangatahana efa any amin’ny tompon’andraikitra. “mba ataovy sonia tompoko ny dosie mahakasika ny fanamboarana lalana Ambatoboeny 18 km fa dia hitokamonina tanteraka izahay Ambatoboeny amin’ity taona ity raha tsy vita io lalana io ary efa tonga tany aminareo ny taratasy fa nampalahelo anay dia niverina tsy vita sonia ilay dosie”, hoy hatrany izy ireo.
Ampio tosika tompoko ny fangatahana ataon’ny tompon’andraikitra any an-toerana sy ny vahoaka ao Ambatoboeny. Manao antso avo ihany koa amin’ireo rehetra zanaka Ambatoboeny tsy an-kanavaka hatramin’ireo any any ampitan-dranomasina ireo mponina mba hanohana ny fangatahana ataon’i Jeannot Fernand Solombavambahoaka sy Jean Valérien Rakoto Ben’ny tanàna. Tsy fotoan’ny ady sy loko politika tsy mitovy intsony izao fa andao hatambatsika ny hery ho an’ ity tanàna malala ntsika ity, hoy hatrany izy ireo.
“Tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe” FIKASANA HANONGAM-PANJAKANA, FANAKORONTANA … (464) 14 janvier 2021 Tantsambo nitsabo tena nasaina nandohalika avy eo notifirina FAHADISOANA TOMBANTOMBANA (159) 13 janvier 2021 Lahiantitra 60 taona nanolan-jaza 5 taona VOHIDROTRA TOAMASINA II (121) 14 janvier 2021 Nilaza ho tsy tompon’antoka koa ny Fadintseranana FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (102) 13 janvier 2021 Nakorain’ireo mpijery ny Ben’ny tanànan’Antsiranana FANDRAVANA LALAO (74) 19 janvier 2021 Milaza hanova paikady amin’ny fanakorontanana ny firenena RODOBEN’NY MPANOHITRA (71) 14 janvier 2021